Izingane nesifo sikashukela: indlela yokuvikela ingane ezifweni ezimbi > Isifo sikashukela
Umzali ngamunye uphupha ukuthi ingane yakhe ikhula ikhule ibe nempilo ephelele. Kepha njengoba ingane ikhula, amanyikwe ayo iba sengozini kakhudlwana. Isikhathi esibucayi siphakathi kweminyaka emi-5 neli-12 ubudala, kuthi-ke, lapho kuqala ukuhlinzwa kwe-hormonal, inkinga iya ngokuncipha. Kepha hhayi ingane eyodwa ephephile kusukela ekuqaleni kwesifo sikashukela. Ikakhulu ubungozi bukhulu kulezo zingane ezinabazali noma izihlobo eziseduze ezihlushwa yilesi sifo. Ungayivikela kanjani ingane kwisifo sikashukela?
Izimbangela eziphambili zalesi sifo ezinganeni
Isifo sikashukela sohlobo loku-1 yisifo esihambisana nokuntuleka kwe-insulin ekhishwa ngamanyikwe. Lesi sifo sinezimpande zofuzo, ngoba sidluliselwa ngohlobo oluphambili lwe-autosomal. Lokhu kusho ukuthi uma okungenani umzali oyedwa egula isifo sikashukela sohlobo 1, lesi sifo sizodluliselwa enganeni ngamathuba okungenani angama-75%. I-Pathology ivame ukukhula ngokunembile ebuntwaneni, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukungabandakanyi ithonya lezinto ezisengcupheni enganeni.
Isifo sikashukela sohlobo 2 yisifo esihlobene nokushoda kwe-insulin. Ngamanye amagama, amanyikwe angenza kahle ngemisebenzi yawo, kepha amaseli wezicubu awathinteki kahle kwi-hormone. Lesi sifo sivame ukukhula kubantu abadala, kepha nansi eyakhe "indiza emafutheni." Lesi sifo sibuye sidluliselwe ngohlobo olujwayelekile, okusho ukuthi amathuba okukhula kwalo ngesikhathi sokuphila aphezulu njengaleso sikashukela sohlobo 1. Ngakho-ke, futhi kubalulekile ebuntwaneni ukugwema ithonya lezinto ezishukumisayo, ngoba uhlobo 2 lwesifo sikashukela luba mncane ngokuthe xaxa.
Ngezansi izimbangela ezifanele kakhulu zokukhula kwalesi sifo ebuntwaneni.
Ukulimala kwesisu. Iningi lezingane lihola indlela yokuphila esebenzayo, evame ukuhambisana nokuwa, ukushaya ngengozi kumanyikwe. Ngenxa yalokhu, kwakhiwa ama-micromatomas kuyo ephulukisa ngaphandle kokubangela ukukhathazeka okukhulu enganeni. Kodwa-ke, izicubu zomzimba ziqala ukusebenza ngokulimazeka ngemuva kweziqephu ezimbalwa ezihlukumezanayo.
Izifo ezibandayo. Amagciwane anekhono lokuthinta ngqo ama-pancreas, okuthi emasontweni ambalwa, futhi kwesinye isikhathi ngokushesha, kuholele kwisifo sikashukela. Kepha amathuba okulimala okubangelwa amaseli we-pancreatic aphezulu, izinga lokushisa lomntwana likhuphuka isikhathi eside.
Imiphumela ye-Autoimmune. Noma yimuphi ama-ejenti athelelekile adlala indima - amagciwane, amagciwane, isikhunta. Ngokuphikisana nesizinda sesifo esivele sikhona noma i-foci engapheli yokwenziwa kabusha kwama-microorganisms (emathinini, izinso, isisu), isifo sokugomela sihlushwa. Ngenxa yalokhu, kuvela isimo lapho amaseli we-pancreas ebonwa njengezitha, ophoqa uhlelo lokuzivikela olubuthaka ukuba lukhule amasosha omzimba (autoantigens). Balimaza amaseli e-pancreas, abangela isifo sikashukela.
Izifo eziyingozi ezibangelwa amagciwane. Kunezifo ezithathelanayo ezingamagciwane wazo aba nomphumela olimazayo kuma-islets weLangerhans (amaseli akhiqiza i-insulin ngqo yama-pancreas. Lesi yisidumbu (i-mumps), i-rubella ne-hepatitis A. Ukugula kuyanyamalala ngaphandle komkhondo, akubona ababulalayo, kodwa ezinganeni ezinesifiso sokuthola ifa lokuthayipha isifo sikashukela sokuqala, isifo sikhula ngamaphesenti angama-95.
Ukuhlukumeza. Lesi yisici esingaqondisi. Umthwalo kuma-islets weLangerhans uyanda, ngenxa yalokho ancipha. Ukudla ngokweqile okuholela kokukhuluphala, ngokubhekela emuva kwendlela yokuphila yokuhlala phansi, ehleli kubhekeni lekhompyutha, nakanjani kungaholela kwisifo sikashukela. Umbuzo kuphela isikhathi, kepha zombili izinhlobo zohlobo 1 nolwesibili kwezifo zingakheka.
Inhlanganisela yokuvusa ubangela ubungozi obukhulu bokuthola isifo sikashukela enganeni. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukungalindi ukuvela kwezimpawu eziyingozi ngendlela yomchamo onamathelayo noma ukoma okungenakuqedwa, futhi kusukela ekuzalweni kwengane ukuvimbela ukukhula kwesifo esibi.
Ungasigwema kanjani isifo sikashukela ebuntwaneni
Umvuseleli oyinhloko walesi sifo uyifa, ngakho-ke ngemuva kokuba ingane izelwe, ukuyiguqula ngeke kusebenze. Ngaphambi kokukhulelwa okuhleliwe, kungakuhle ukuthi uvakashele izikhungo ukuze uthole ukwelulekwa ngofuzo ukuze unciphise ubungozi bokuthola isifo sikashukela. Zonke ezinye izindlela zokuthintela ezandleni zabazali.
Izindlela zokubopha eziyinhloko zibhalwe ngezansi.
Gwema ukutheleleka komkhuhlane. Kwanele ukungavakasheli izindawo ezinabantu abaningi ngalesi sikhathi sokubhubhisa noma ukunikela ingane yakho izidakamizwa ezingasebenzi ngalesi sikhathi. Imayelana nezidakamizwa ezinamandla okucindezela ukuphindaphindwa kwegciwane emzimbeni wengane (oseltamivir, zanamivir, algir). Ama-interferon esikhuthazi akumele athathwe - ezimweni eziningi ngeke aphumelele. Uma isifo sivela, sikwelapha ngentshiseko ukuze ukululama kwenzeke ngokushesha okukhulu.
Yehlisa izinga lokushisa, ikakhulukazi ngenhla kwama-degrees angama-39, ngazo zonke izindlela ezitholakalayo zokutheleleka okuthile. Lokhu kubaluleke kakhulu ezinganeni ezinomlando wesifo sikashukela. Ekushiseni okubuthaka, ingozi yokulimala kwezicubu ze-pancreatic iphakeme ngokweqile.
Yilwa nezifo ezingamahlalakhona. Ukwelapha ama-caries, i-tonsillitis futhi ikakhulukazi i-gastritis ngesikhathi nesikhathi kuze kube sekupheleni, ngoba i-bacterium - pyloric Helicobacter iyaqhubeka (iphindaphindeka njalo) esiswini.
Phendula kunoma yikuphi ukulimala kwesisu. Xwayisa ingane ngengozi yabo.
Vikela ukutheleleka ngezifo eziyingozi. Bheka ngokucophelela izinyathelo zokuvalelwa yedwa, ubheke inhlanzeko yengane.
Yidla ngakwesokudla. Ukudla okungenamsoco okuncane, ngcono ama-pancreas azosebenza.
Ngokulandela imithetho elula yokuzivikela, unganciphisa ubungozi besifo sikashukela. Kepha ngokuthuthuka kwezimpawu zokuqala ezisolisayo zalesi sifo, into esemqoka ukungabambezeli ukuvakashelwa uchwepheshe. Ukwelashwa kusenesikhathi kuzosiza ukunxephezela ngokuphelele le nkinga, futhi ingane izophila impilo ende nethokozisayo.
Musa kude nezakhi zofuzo?
Isici esiyindlalifa ekwakhiweni kwalesi sifo sibhekwa njengokufakazelwa, kepha akusiyona eyinhloko. Yize kunjalo, lezo zingane ezingakaze zibe nabantu abanalesi sifo emndenini wazo zinoshukela. Futhi ngefa elibi, ubungozi abubukhulu kangako. Ngakho-ke, ngokwezibalo, isifo sikashukela sidluliselwa kusuka kubaba ogulayo kuphela emaphesenti ayi-6. Kusuka kumama, ngisho nangaphansi - kumacala angama-3.6% (futhi uma umama ebeletha ingane engaphansi kweminyaka engama-25 - khona-ke eyi-1.1% kuphela). Okuqhamuka kubafowethu nodadewethu lesi sifo sizalwa ngamagciwane angaphansi kuka-6.4%, futhi noma ngabe bagula ngaphambi kweminyaka engama-20. Futhi uma kamuva, lapho-ke ingozi ebafowethu nabadadewethu incishiswe ibe ngu-1.1%. Ingozi enkulu yokugula (ingozi engenhla kwama-20%) ikhona kuphela ezinganeni uma bobabili abazali benesifo sikashukela. Kepha thayipha isifo sikashukela esingu-2, esenzeka, njengomthetho, kubantu abadala, sithola ifa kaningi kakhulu. Esimweni lapho bobabili umama nobaba behlaselwa yilesi sifo, ingozi yokugula ngesikhathi sokuphila kwengane isifinyelele ku-80%.
Ngeshwa, eminyakeni yamuva nje, iningi labasha abasebancane baye bathola isifo sohlobo 2, oluthathwa njengomphumela wendlela yokuphila engenampilo (ukuntuleka kokuzivocavoca umzimba, ukusetshenziswa kokudla okuningi nokunempilo okungekuhle).
Yize izimbangela ngqo zesifo sikashukela zingacacanga kusayensi, sekucacile ukuthi izimpande zesifo ekuxhumaneni okuyinkimbinkimbi kokuqalwa kwengozi yofuzo, ukutheleleka ngegciwane kanye nokuphazamiseka kwezifo zokugonywa. Akuzenzekeli ukuthi ngokuvamile lesi sifo siqala emva kokutheleleka ngegciwane. Noma ngemuva kokuxineka kakhulu (ngokomqondo nangokomzimba, ngokwesibonelo, ukuzikhandla okukhulu noma ukuhlinzwa komzimba). Imvamisa, isifo sikashukela senzeka ezinganeni ezisengozini eziye zahlaselwa imithambo, i-rubella, isimungumungwane, i-herpes, i-rotavirus. Ngakho-ke, izingane ezinjalo kufanele zigonywe. Futhi ngaphandle kwalokho, ingane kusukela isencane idinga ukugxilisa amakhono okuhlanzeka, ngoba ama-causative agents wezifo eziningi angena emzimbeni evela ezandleni ezingcolile.
Ngaphezu kwalokho, ukuqina okuqinile kungaletha izinzuzo - kunciphisa imvamisa yamakhaza, nawo angaphephile.
Futhi-ke, kubalulekile ukunikeza ingane isizinda esihle esingokomzwelo ekhaya naseqenjini lezingane. Ngempela, ukucindezelwa yi-3-5% kukhulisa ubungozi bokuthola lesi sifo. Iqiniso ngukuthi i-adrenaline (i-hormone yokucindezela) ingabhubhisa i-insulin. Akufanele kube khona amahlazo nokuxabana ekhaya, futhi ingane akufanele iye engadini nasesikoleni isuka ngaphansi kwenduku, kodwa uma kungenzeka ngentokozo.
Ukusuka ekudleni kuya enkingeni
I-Nutrition Factor ibaluleke kakhulu. Kepha iqiniso lokuthi isifo sikashukela singakhula kunoma iyiphi ingane ngokuvela kumaswidi ngokweqile liyinganekwane, ngoba lidinga izimo ezikhethekile. Yize kunjalo, ukudla ngokweqile ngamakhekhe namaswidi akulungile kunoma yikuphi ukubukwa. Noma kunjalo, ubungozi abukhona nje kuphela obumnandi, kepha futhi noma yikuphi ukweqisa, kanye nokudla okusezingeni eliphansi kanye nokuntuleka kombuso wokudla okwedliwayo.
Ukukhuluphala kanye nokungondleki kwandisa amathuba okuthola isifo sikashukela ngo-10-15%. Ngemuva kwakho konke, izicubu ze-adipose zivikela i-insulin, okungukuthi, ushukela uqongelela izicubu, futhi i-insulin ayikwazi ukuzifinyelela. Ngakho-ke, ukuvikela lesi sifo, ikakhulukazi phakathi kwalabo abanqunyelwe kuso, kubalulekile ukuqapha ukudla. Kufanele ilinganise kumaprotheni, amafutha kanye nokuqukethwe kwe-carbohydrate. Ama-monotonous, ikakhulukazi ama-carbohydrate nokudla okunamafutha kuyingozi enkulu. Inani elikhulu lamafutha liguqula ama-insulin receptors, futhi ukutholwa okujwayelekile kwe-glucose ngamaseli akwenzeki. Ngakho-ke, kungcono ukungadli ingulube, amasoso, imikhiqizo yobisi enamafutha namakhekhe. Ukudla okunosawoti nakho akukuhle. Udinga ukudla kaningi, kayisithupha ngosuku, futhi kancane kancane. Kubalulekile ukuthi ukudla kungokwemvelo: imifino, inhlanzi, imikhiqizo yobisi, inyama esele, okusanhlamvu, izithelo, amantongomane.
Ungaba kanjani nemidlalo
Ukuzivocavoca maqondana nesifo sikashukela kungaba yimbangela yokuzivikela. Ukuvivinya umzimba njalo nokulinganiselayo kungumuthi omkhulu! Ukuzivocavoca kwandisa ukuzwela kwezicubu zomzimba kuyi-insulin futhi kwehlisa ushukela wegazi. Kodwa ukusebenza ngokweqile komzimba okungalawulwa kububi bokuthi behlukaniswe ngezigaba, ikakhulukazi ezinganeni ezinezinye izinto ezisengcupheni yokuthola isifo sikashukela. Ngakho-ke, ngaphambi kokwenza umsubathi onguchwepheshe wengane yakho, hlola ubuhlakani bakhe. Mhlawumbe ayifanele ingozi?
Futhi-ke, izingane nabantu abadala abasengozini zidinga ukubhekwa njalo kwe-glucose yegazi kanye ne-glycosylated hemoglobin (kanye ngonyaka).
Ukuhambisana nendlela yokuphila enjalo kunciphisa kakhulu amathuba engane (ngisho nefa elingathandeki) ukuthola isifo sikashukela.
Kubhekwe ukuthi isifo sikashukela sohlobo 1 sivame kakhulu kubantu, ekude kakhulu nalapho behlala khona kusukela e-equator. Iningi leziguli emazweni aseScandinavia (abantu abangu-20 bokuqala abagulayo ngezinkulungwane eziyikhulu ngonyaka). Isilinganiso sokwanda kwesibalo e-United States, Netherlands, New Zealand, Russia (sineziguli ezintsha eziyi-13.4 ngenkulungwane eziyikhulu ngonyaka). Bambalwa kakhulu abanesifo sikashukela ePoland, e-Italy, kwa-Israyeli (ngaphansi kwabantu abangu-7 ngenkulungwane eziyikhulu ngonyaka). Futhi izehlakalo eziphansi kakhulu emazweni aseNingizimu mpumalanga ye-Asia, eChile, eMexico (abantu abangaphansi kuka-3 kubantu abayizinkulungwane eziyikhulu ngonyaka).
Kunezinhlobo 1 zesifo sikashukela uhlobo 1 nohlobo 2.
Thayipha isifo sikashukela sokuqala okuvame kakhulu, kuvame ukukhula ebuntwaneni nasebusheni. Isizathu salo esiyinhloko ukunqanyulwa kokukhiqizwa kwe-pancreatic hormone ye-insulin, ebandakanyeka kuzo zonke izinqubo ze-metabolic kwezicubu zomzimba. Lokhu kungenxa yokufa kwamaseli we-beta eziqhingini zaseLangerhans ngenxa yokuphazamiseka kofuzo, kanye nemiphumela elimazayo yobuthi namagciwane, kufaka phakathi izifo ezithathelwanayo ezinjenge-isimungumungwane, irubella, im Mumps, inkukhu.
Thayipha isifo sikashukela sesi-2 Imvamisa ikhula phakathi kweminyaka yobudala nobudala, yize isanda kuba mncane kakhulu. Le yindlela ejwayelekile yesifo lapho amanyikwe, yize eqhubeka nokukhiqiza i-insulin, amangqamuzana e-adipose izicubu, izicubu nesibindi ayekile ukusabela kahle kuso. Izimbangela eziphambili zesifo sikashukela sohlobo 2 ukukhuluphala, ukungasebenzi ngokomzimba, kanye nokuxineka ngokomzwelo.
Kuzo zombili izinhlobo zesifo sikashukela, ngenxa yokushoda kwe-insulin egazini lomuntu, kuqoshwa ushukela ophakeme (ushukela), okuthi ngokuhamba kwesikhathi, ikakhulukazi ngokulawulwa okunganele kwalesi sifo, kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu:
ukungasebenzi kwengqondo, imivimbo,
ukulimala kwezimpawu zokukhombisa, okuholela ekulahlekelweni kokuzwela kwezitho, ngenxa yalokho i-gangrene ihlala ikhula, kudinga ukunqunywa,
ukunganeli kwegazi okwanele kuwo wonke izicubu nezitho zomzimba ngenxa yokulahleka kokuqina kwemithambo yegazi, okuholela ekuholeni kwe-atherosulinosis, arrhythmias, isifo senhliziyo,
ukhubazeka okubukwayo, kuze kufike ekulahlekelweni ngokuphelele,
ukwephula yonke imisebenzi yesibindi,
ukwakheka kwezilonda zesikhumba se-neurotrophic,
ukungasebenzi ngocansi emadodeni nokungazali kwabesifazane,
izifo zomlomo namazinyo, njll.
Futhi nokho, into esemqoka okudingeka uyazi mayelana nesifo sikashukela ukuthi ngamunye wethu uyakwazi ukuvimba ukukhula kwakhe, ikakhulukazi isifo sikashukela sohlobo lwesibili. Lokhu kungenzeka uma nje kunokuqonda okucacile ngemiphumela emibi yalesi sifo empilweni futhi iqiniso lokuthi isifo sikashukela asikwazi ukwelashwa, kodwa kungenzeka ukuthi singasivimbela. Isifo sikashukela mellitus ns kufanele sesatshwe, kufanele sivikelwe, ngokulandela uchungechunge lwemithetho nezincomo eziyinkimbinkimbi kangako.
NGINGAVULA IZIBHENO 1?
Ngokuqondene nesifo sikashukela sohlobo lokuqala, kuleli cala, ngenxa yendima enkulu yesandulela sofuzo seposi (ifa), singakhuluma kuphela ngokuncishiswa okuphezulu kwengozi yokuthola lesi sifo. Kuze kube manje, kubaluleke kakhulu kubo bonke abantwana abasengozini kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila ukuze baqinisekise:
ukuncelisa okungenani izinyanga eziyisithupha,
ukunamathela ngokucophelela emithethweni yokuhlanzeka kanye nohlelo lokugoma olunconyiwe lokuthelelana nezifo ezithathelwanayo ezinkulu,
Ukudla okulinganiselwe okuphezulu kunamaprotheni namafutha emvelaphi yezilwane nemifino (lokhu kokugcina kufanele kunikezwe kuqala), ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi, amavithamini, ama-amino acid, wonke umkhanya wezinto ezincanyana kanye nama-macro nezinye izakhi ezibalulekile,
ngokucophelela, futhi uma kunesidingo, lawula isisindo,
imisebenzi ejwayelekile yezimoto.
UKUVUNYELWA KWESIQINISO 2
Ukuzivikela wena nabathandekayo bakho kwisifo sikashukela sethin yesibili nakho akunzima kakhulu.
Ukugcina ukulingana okulingana kwamanzi. Akusizi ngalutho ukuthi odokotela bayo yonke imisebenzi ekhethekile bangakhathali ukuphindaphinda: Amalitha ama-2-3 amanzi adakiwe ahlanzekile asenamanzi ngosuku ayisihluthulelo sempilo enhle, impilo enhle nokuphila isikhathi eside. Ungakhohlwa ukuthi yonke ingqamuzana lomzimba wethu ingamaphesenti angama-75 amanzi, edlala indima ebaluleke kakhulu ekusetshenzisweni komzimba nokusebenza kwesitho ngasinye. Lokhu kusebenza ngokuphelele kumanyikwe, okuthi, ngaphezu kwe-insulin, kukhiqize isixazululo samanzi se-bicarbonate, okudingekile ukwenza amajwabu emvelo omzimba abe khona. Kulokhu, ama-pancreas adinga amanzi. Kwenze umthetho njalo ekuseni ngesisu esingenalutho, bese uphuza izingilazi ezi-1-2 zamanzi ahlanzekile (mhlawumbe afudumele) izikhathi ezi-1-2 ngosuku, imizuzu engama-20 kuye kwengama-30 ngaphambi kokudla ngakunye.
Umsoco olinganiselayo. Yidla okungenani izikhathi ezingama-4-5 ngosuku ngosuku ezingxenyeni ezincane (ukugwema ukucindezela ngokweqile kumanyikwe), ukhetha ukudla kwesitshalo kanye nokunciphisa ukusetshenziswa koshukela ocwengekile, ama-muffin, iziphuzo ezimnandi zekhabhoni, ukudla okusheshayo, okuthosiwe, okunamafutha, okubhemayo, okukheniwe , ukudla okunama-khalori aphezulu, imimoya, ikhofi. Ukudla okusebenza kahle kakhulu okunciphise kakhulu ku-antidiabetes kanye noshukela-ubhontshisi, izithelo zezithelo zomdondoshu, imifino eluhlaza enamahlamvu, utamatisi, upelepele obumnandi, ama-walnuts - ungakhohlwa ukuzifaka ekudleni kwakho.
Ukulawula isisindo somzimba. Khumbula: ikhilogremu eyengeziwe iyisinyathelo esiya emaphethelweni kwalasha okuthiwa i-mellitus yesifo sikashukela. Gada isisindo njalo, uvikele inzuzo yaso ebukhali nendlala. Isisindo somzimba esifanele, kucatshangelwa zonke izici ngazinye, kuzokusiza ukubala bese usekela owondlayo.
Ukuqina kwemizwelo. Uma kungenzeka, zama ukugwema izingcindezi, ikakhulukazi ezingapheli. Uma kunesidingo, bonana nodokotela wezengqondo, funda izindlela zokuzindla nokuzilolonga. Ngokufunda ukulonda ukuthula kwengqondo futhi uphendule ngokwanele ebunzimeni bempilo nasekusheni, uzozivikela hhayi kwisifo sikashukela kuphela, kepha nakuzo zonke izifo zizonke. Ukwenqaba imikhuba emibi. Musa ukusebenzisa kabi utshwala, ikhofi eqinile netiye elimnyama. Ungazenzisi - phuza imithi (kufaka phakathi amakhambi abantu) njengoba kuyalelwe udokotela wakho. Futhi ungalokothi uthathe ugwayi nanoma yiziphi izinto ze-narcotic ezandleni zakho.
Ukulawulwa kwempilo. Odokotela bangabangane bakho abahle nabasizi bakho ekugcineni impilo, ngakho-ke ungazungezi amahhovisi abo ngendlela yeshumi. Nganoma yikuphi ukugula okusolisayo noma okuvunyelwe, qiniseka ukuthi uthintana nabo ukuthola izeluleko. Futhi kwenze kube ngumthetho kanye ngonyaka ukwenza uhlolo oluphelele lwezokwelapha ngazo zonke izivivinyo, kufaka phakathi izinga le-glucose egazini. Ukuxilongwa kusenesikhathi, ukwelashwa okulungiselelwe okufika ngesikhathi futhi, ngenxa yalokho, ukuqeda ngokushesha nezinkinga zezempilo kusifanele isikhathi esisichitha.
Isifo Sokuvimbela Ushukela
Akubona abantu abaningi bazi ukuthi ukufakwa kwamafutha ngokwezinga elikhulu akwenzeki ngokuqukethwe kwekhalori yemikhiqizo edliwayo, kodwa ngekhwalithi yabo ephansi nokulimala. Ngakho-ke, ukuvimbela ukukhula kwesifo sikashukela, into yokuqala oyidingayo ukuze ushintshe indlela odla ngayo.
Kuze kube manje, kuyadingeka ukunciphisa ukusetshenziswa kwe-carbohydrate esheshayo enenkomba ye-glycemic ephezulu (kukhombisa izinga lokudla kwama-carbohydrate egazini nesikhathi sokuguqulwa kwabo kube ushukela). Ngakho-ke, kuyadingeka ukukhipha kwimenyu yansuku zonke iziphuzo ezimnandi zekhabhoni, ushukela, uju, amaswidi, amalinki, isinkwa esimhlophe.
Uma i-GI iphakeme, khona-ke lokhu kubonisa ukwanda kokudla okusheshayo, ngakho-ke ukudla okunjalo akubhekwa njengokulusizo. Nge-GI ephansi, ama-carbohydrate agayeka kancane, futhi ushukela ungena kancane emfudlaneni wegazi, ngakho-ke ama-pancreas azoba nesikhathi sokufihla i-insulin.
Kepha akwenzeki njalo ukudla okulungile. Isibonelo, abantu abaningi bakuthola kunzima ukuyeka amaswidi. Kulokhu, kungcono ukusebenzisa ama-sweeteners (ngokwesibonelo, i-stevia) kanye namabha kashokholethi namaswidi kungcono ukukubona ngama-marshmallows, i-marmalade, i-jelly namanye ama-dessert angenabungozi kangako.
Ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi adonswa kancane kancane ekudleni okugaya kuwo afaka ufulawa oxubile, okusanhlamvu okuhlukahlukene, imifino ethile, iklabishi nokunye ukudla okune-fiber. Abantu abaningi bayazi ukuthi imifino nezithelo ezintsha kuyisitoreji samavithamini, amaminerali kanye nokhiye wesibalo esihle, esincane. Kepha ngokuthambekela kokukhulu ngokweqile kanye nengozi ye-hyperglycemia engapheli, ubhanana, ama-sitrobheli, ama-apricots, amagilebhisi, amazambane, amakhabe, amakhabe kanye izaqathi kusadingeka ukuthi kudliwe ngenani elilinganiselwe. Eminye imithetho ebalulekile nayo kufanele ibonwe:
Kungcono ukupheka imikhiqizo kuhhavini noma upheke, futhi lapho uyithosa kuyadingeka ukusebenzisa amafutha emifino kuphela.
Onke amafutha ezilwane kufanele athathelwe indawo ngamafutha emifino.
Itiye elimnyama kufanele likhethwe ngaphezu kwetiye eliluhlaza, nekhofi ngaphezulu kwe-chicory.
Ukudla kokudla kufanele kukhethwe futhi kususwe isikhumba enkukhuni.
Emini kufanele okungenani kube nokudla okungu-5 kwezingxenye ezincane zokudla.
Akufanele udle ukuze ujabule.
Awukwazi ukubulawa yindlala, ngoba lokhu kuholela ekwehleni okunamandla kokuhlushwa ushukela.
Udinga ukudla kancane, ukuhlafuna ukudla kahle.
Akunasidingo sokudla ukudla okusele uma uzizwa ugcwele.
Akufanele uye esitolo ulambile.
Ukuvikela ukudla ngokweqile, ngaphambi kokudla, kufanele ucabange ukuthi ngabe ikhona ngempela indlala. Kulokhu, kufanele uzame okuncane ngangokunokwenzeka ukuzama ukudla ngesikhathi sokupheka.
Ngomzwa obuthakathaka wendlala, okokuqala udinga ukudla okuthile okunempilo futhi okuphansi kilojoule. Kungaba i-apula, ikhukhamba, iklabishi noma ama-cherries.
Ungazivikela kanjani kushukela ngemikhiqizo?
Bambalwa abantu abaziyo ukuthi ubhontshisi, i-blueberries, isipinashi, ugarlic, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, u-anyanisi kanye ne-sauerkraut banegalelo ekukhiqizweni kwe-insulin futhi kuthuthukise umsebenzi we-pancreatic.
Izizathu: kungani abesifazane abakhulelwe beba yisifo sikashukela?
Isifo sikashukela yisifo esivame kakhulu kangangokuba amamitha kashukela egazi akhangisa eziteshini zethelevishini. Kepha akuhlali kusobala futhi ikakhulukazi kuyinkinga engapheli. Ngokusho kochwepheshe, ngokwesilinganiso ama-3 kuya ku-10% abesifazane abakhulelwe banesifo sikashukela sokukhulelwa, isifo asymptomatic esivele ngemuva kokukhulelwa futhi singadlula ngaphandle kokulandela umkhondo ngemuva kokubeletha.
Phakathi kwezimbangela zesifo sikashukela i-mellitus, ifa elivame ukubizwa kakhulu, kanti futhi ubungozi bubandakanya ukukhuluphala, ngaphezulu kweminyaka engama-40, ukubhema nokunye okuningi. Kepha ngesifo sikashukela esikhulelwe, isimo sehlukile. Ikhula ngokumelene nesizinda sokuphazamiseka kwe-hormonal, okunciphisa ukuzwela kwamangqamuzana kuyi-insulin ekhiqizwa ngumzimba - okubizwa ngokuthi yi-insulin ukumelana. I-glucose iyadingeka kulungu lesibeletho kanye neplacenta. Ngakho-ke, ukuze kubuyiswe ukuhanjiswa kwayo, ama-pancreas omama abakhulelwe akhiqiza i-insulin ngokweqile. Uma engakwazi ukubekezelela, owesifazane uba nesifo sikashukela sokukhulelwa.
Izimpawu: ungaqonda kanjani uma umama okhulelwe egula?
Owesifazane okhulelwe kudokotela
Odokotela bathi owesifazane okhulelwe angathola umlomo owomile nokoma njalo, isicanucanu nokuhlanza, akhathale masishane, futhi kuvame ukuya endlini yangasese kaningi. Kodwa zonke lezi zimpawu zingenzeka ngokukhulelwa okujwayelekile kowesifazane onempilo ngokuphelele. Inkomba esobala kakhulu isisindo esikhulu sokuzalwa sezingane zangaphambilini kanye ne-fetus ekhula ngokushesha, ezokwaziwa ngemiphumela yokuhlolwa kwe-ultrasound.
"Kokhokho bethu, isisindo esikhulu sengane esanda kuzalwa sathathwa njengophawu lwempilo -" iqhawe lizokhula! "- Uyatshela U-Natya Konanova, i-endocrinologist ye-Center for Reproduction and Family Planning "MEDICA", uchwepheshe ekuhlolweni nasekuphatheni ama-endocrine pathologies kwabesifazane abakhulelwe. — Kodwa-ke, umuthi wanamuhla ufakazisile ukuthi izinsana ezikhuluphele, ngakolunye uhlangothi, zigcwele imiphumela emibi futhi kwezinye izimo ziwumphumela wesifo sikashukela sokukhulelwa komama. Imvamisa ngizwa ezigulini zami ezithole ngale ndlela yokuxilongwa: “Kodwa ngijabule!” Futhi-ke, lokhu kunjalo uma kufanele ulalele udokotela kuqala, hhayi umzimba wakho ”.
Udokotela uzokwazisa owesifazane ukuthi afunde amazinga kashukela egazini. Imvamisa, ayidluli ku-5.1 mmol / L. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukubhalisa kusenesikhathi ekhulelwe futhi ubhekelwe udokotela njalo. Ngemuva kwakho konke, ukuhlaziya kokuqala kwe-glucose kwenziwa emavikini ama-22- 24, futhi uma imiphumela yayo idlula esejwayelekile, umama okhulelwe uzobonwa udokotela obambele kuze kube sekupheleni kokukhulelwa.
UNatalia Konanova ukhokha ukunakwa okukhethekile: “Ukuhola isiguli ngesifo sikashukela sokumelana nokubelethisa, kanye nowesifazane owatholakala enalesi sifo ngaphambi kokukhulelwa, kufanele abe ngudokotela onenkinga kule nkinga, futhi akuyona yonke le nqubo ye-endocrinologist. Qiniseka ukuthi uthola ukuthi udokotela wakho uhlangabezana ngqo noshukela okhulelwe. ”.
Imiphumela: yini esongela ushukela kumama nengane?
Ingozi esobala kakhulu yesifo sikashukela sokumelana nokudla emzimbeni ukuthi i-glucose idluliselwa embungwini ngokweqile, lapho icubungulwa, ikhiqiza i-insulin yayo, ngakho-ke ingane esanda kuzalwa ingavele ibe nesifo sikashukela, esizohambisana naye impilo yakhe yonke. Ngaphezu kwalokho, i-glucose eyeqisayo inomthelela ekuthuthukiseni ukukhuluphala hhayi kuphela kubantu abadala nasezinganeni, kodwa ngisho nangokuthuthuka kwe-intrauterine.
"Ingane iqala ukukhula ngokushesha kunokuba kufanele, futhi okubaluleke kakhulu, hhayi ngenxa yokwanda, ngokwesibonelo, kwekhanda, kodwa ngenxa yomzimba, ibhande lamahlombe- ukuphawula ngemiphumela I-Endocrinologist ye-Atlas Medical Center, MD Yuri Poteshkin. - Lokhu ukukhula okungafaniyo. Njengokulindelekile, lokhu kuzophazamisa inqubo ngokuzayo. ”
U-Endocrinologist weSikhungo Sokuzala Nokuzalwa Komndeni i-"MEDICA", uchwepheshe ekuhlolweni nasekuphatheni ama-endocrine pathologies kwabesifazane abakhulelwe u-Natalya Konanova kudonsela ukunakekela ekuthuthukisweni okungenzeka kwamanye ama-pathologies: “Ukungena kwegazi lowomama elinoshukela omningi nge-placenta kuya esibelethweni kukhulisa ubungozi bokukhubazeka kwenhliziyo, isibindi kanye nezifo zomgogodla, okuholela ekungavikelekeni kwengqondo namaphaphu. I-mestitus yesifo sikashukela sokubelethisa ingadala ukukhuluphala esikhathini esizayo, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, izifo zenhliziyo ezi-coronary komama nezingane. ".
Isifo sikashukela esibuhlungu emzimbeni sisongela umama wakusasa nge-toxicosis sekwephuzile, ukuvuvukala, ukunyuka kwengcindezi, ukungasebenzi kahle kwezinso, ngisho nokuzalwa ngaphambi kwesikhathi kanye nokuphuphuma kwesisu.
Umshuwalense: ingabe isifo sikashukela singavinjelwa?
Izinyathelo Ezikhulelwe Zegazi Ushukela
Noma esesigabeni sokuhlela ukukhulelwa, kufanelekile ukuthatha ukuhlolwa kwegazi ukuthola ukuthi umama wakusasa akanalo yini ushukela ojwayelekile wohlobo lokuqala noma lwesibili. Lokhu okungenani kuzosusa izingozi eziningi. Kepha ukukhulelwa uqobo kuyinto enamandla ekwakheni lesi sifo.
"Ukukhulelwa kuvusa izinguquko ezinamandla kakhulu emzimbeni, kufaka phakathi ukusebenza kwezinqubo zamahomoni, futhi lokhu kusongela ukuphazamiseka kwe-endocrine- imibono I-endocrinologist, uchwepheshe ekuhlonzeniweni nasekwelashweni kwe-endocrine pathologies kwabesifazane abakhulelwe, Isikhungo Sokuzala Nokuhlelwa Komndeni "MEDICA" Natya Konanova. — Ukunciphisa lokhu kusongelwa, owesifazane, ikakhulukazi osengozini - ukukhuluphala, “inkimbinkimbi” yefa (esinye sezihlobo sinesifo sikashukela) noma owayenalesi sifo ngesikhathi sokukhulelwa kwangaphambilini - kufanele ahlolwe esigabeni sokuhlela ukukhulelwa e- i-endocrinologist. Uma, ngokwemiphumela yako, kutholakala ingozi yokuthola isifo sikashukela sokuthambisa, isiguli sinikezwe ukwelashwa okunqunyelwe. Njengomthetho, owesifazane uyanconywa ukuba aguqule indlela yakhe yokuphila, ukudla, engeza ukusebenza komzimba, ukulawula ushukela wegazi nezinye izinyathelo. Ngokusekelwe emiphumeleni yokwelashwa, i-endocrinologist izonquma ngokukhulelwa okuphephile okukhona kukamama nengane».
Kodwa-ke, ukubona ukudla ngesikhathi sokukhulelwa, kufanele kukhunjulwe ukuthi nsuku zonke udinga ukusebenzisa ama-kilocalories angama-2500 ekukhuleni okuvamile kwesibeletho. Into esemqoka ukunciphisa ukweqa kushukela wegazi futhi kusatshalaliswe ngokulinganayo ama-carbohydrate aqukethe ezitsheni ezithile, ngokwesikhathi sokwamukelwa, ngenkathi unikeza okuthandwa yimikhiqizo enenkomba ephansi ye-glycemic. Njengoba i-insulin ikhishwa kancane ekuseni, kungcono ukukhawulela ukudla okuqukethe i-carbohydrate ngesikhathi sokudla kwasekuseni. I-fiber, etholakala okusanhlamvu okugcwele, izithelo nemifino, kuzosiza ukunciphisa ingozi yesifo sikashukela sokukhulelwa.
Ukwelapha: yini ukhulelwe onesifo sikashukela ukuze uphile?
Ukudla kuyindlela edingekayo yalabo besifazane abakhulelwe abangakwazanga ukugwema ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, udokotela angahle anikeze ukunqunyelwa kokuzivocavoca ngokomzimba.
“Kuze kufike isikhathi sokuzalwa, umama okhulelwe kufanele ahlole izinga likashukela wegazi lakhe esiswini esingenalutho nsuku zonke nehora ngemuva kokudla, esebenzisa i-glucometer- amanothi I-endocrinologist, isikhungo sokuzala kabusha komndeni kanye nokuhlela "MEDICA", uchwepheshe ekuhlolweni nasekuphatheni ama-endocrine pathologies kwabesifazane abakhulelwe u-Natalya Konanova. — Kubalulekile ukubonana nodokotela masinyane nge-gxuma ebukhali ku-glucose. Ngokuhambisana, udinga ukugcina idayari yokudla futhi uqophe ukuthi umzimba uphendula kanjani ekudleni okuthile. Kudayari ofanayo, ozohlolwa njalo udokotela oyi-endocrinologist onguchwepheshe we-gestational kishukela, isisindo kanye nomfutho wegazi. Uma sikhuluma ngezici zokuphathwa kwabesifazane abakhulelwe abagulayo, khona-ke, njengomthetho, bengeza dopplerometry ye-fetus njalo ezinsukwini eziyi-10 nokuhlolwa kwe-ultrasound.».
Kwesinye isikhathi, lezi zinyathelo kuphela ezanele ukuxazulula inkinga yesifo sikashukela kwabesifazane abakhulelwe, kepha kwesinye isikhathi izidakamizwa ziyadingeka ukwehlisa ushukela wegazi. Ngaphezu kwalokho, noma imuphi umuthi osezibhebheni uvunyelwe ngokuphelele ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa. Kubalulekile ukwazi ngalokhu ukuze ungalimazi ingane.
Isazi se-Endocrinologist se-Atlas Medical Center, Ph.D. Yuri Poteshkin kugcizelela iqiniso lokuthi isidakamizwa esiphephe ngokuphelele se-hypoglycemic ngesikhathi sokukhulelwa yi-insulin: "Ngasikhathi sinye, indlela yokuphatha kwayo ingahlukahluka ngokususelwa kuzidingo: othile uzodinga amapeni ajwayelekile wesirinji, futhi umuntu uzodinga iphampu ye-insulin."
Kunoma ikuphi, isifo sikashukela sabesifazane abakhulelwe asisona isizathu sokwethuka, kodwa ngokubhekisisa impilo yabo. Futhi noma ngabe izimpawu zesifo sikashukela zinyamalala ngokushesha ngemuva kokuzalwa, njengoba kunjalo ezimweni eziningi, kusesekuseni kakhulu ukuba uphumule. Lesi sifo singabuya futhi ngesikhathi sokukhulelwa okulandelayo noma size sikhule sibe uhlobo lwe-2 sikashukela emashumini eminyaka ngemuva kokuzalwa. Ngakho-ke, ngemuva kwezinyanga ezimbili kuya kwezintathu kusiza ukwenza isivivinyo sokuqala, bese uhlolwa njalo okungenani kanye ngonyaka. Lokhu kuzodinga isikhathi esincane, umzamo kanye nezezimali ukwelashwa okulandelayo komama nengane.